Izinhlamvu ze-Anime BEST ezivela kumaQuintessential Quintuplets - Okunye
Izinhlamvu ze-Anime BEST ezivela kumaQuintessential Quintuplets (Ku-Order ye-Ranking)
Ama-Quintupential Quintessential , owaziwa nangokuthi 'Abashadikazi Abahlanu Abashadile' kufakazelwe ukuthi kudumile ngonyaka we-2019.
I-anime mayelana UFuutarou, umfundi ozinikele othola umsebenzi wokufundisa ama-quintuplets ama-5 ngezizathu zezezimali.
Ngisho nginentshisekelo ku-anime, yize ngingaqiniseki ukuthi ngabe yayikhona yini kuwufanele bebuka yonke indlela. Kepha kukhona intelezi ethile kubalingiswa bayo netimu ebazungezile.
Akukhona lokho engingakubiza ngokuthi 'ubuciko' bochungechunge lwe-anime. Kepha akudingeki ukuthi kube njalo. Kukufanelekile noma ngabe usika kanjani.
Ngalokho kusho, ake sixoxe ngalokhu:
Futhi yimiphi engikholwa ukuthi yiwona okuhle kakhulu.
Izinhlamvu ze-Quintessential Quintupential Best (i-Order Usezingeni):
1. UMiku Nakano
UMiku Nakano ubonakala engu- intandokazi phakathi kwabalingiswa abakhulu. Kepha mina - ngicabanga ukuthi uyintandokazi yami engu- # 1 ku-anime kuze kube manje.
Ukhule ngokusobala, kwenzeka ukuba muhle kunabo bonke abalingiswa, ngenkathi mhlawumbe enamahloni futhi 'engenandaba' kunabo bonke odade aba-5.
UMiku Nakano ungomunye walabo bantu abahlulela kakhulu “njengabanzima ukuthola”, ngoba ngaphandle kokuthi ube nokuxhumana naye, ngeke wazi ukuthi ucabangani. Noma ngabe unendaba nhlobo.
Futhi asikwazi ukukhohlwa nje ukuthi kanjani muhle nokufudumala kwenhliziyo izinkulumo ze-anime ze-Miku (nezikhathi) zikumaQuintessential Quintuplets!
Ama 'headphone' akhe amsiza ukuthi avelele ekuklanyweni nokwehluka okubonakalayo, ngakho-ke lokho kuyibhonasi.
2. UFuutarou Uesugi
UFuutarou ngokwemvelo ubuso “obuyinhloko” boluchungechunge. Ngemuva kwakho konke - ufundisa (noma kufanele abe) ama-quintuplets ama-5. Iningi lakhona liyivila futhi alikwazi ukusebenza ekuqaleni.
Futhi 2 ikakhulukazi abanenkani kakhulu kunabo bonke abanye udade (ngikhuluma ngoNino no-Itsuki).
Ekuqaleni bengingazi ukuthi ngenzeni ngo-Uesugi. Indima yakhe bekuyisenzo samahlaya kakhulu kunanoma yini enye esiqeshini sokuqala.
Kubonakale kumnandi, kodwa-ke ngemuva kwalokho angizange ngicabange kakhulu ngaye njengomlingiswa.
Kepha njengoba umbukiso uthuthuka, uqala ukubona uhlangothi 'olungakhululekile' kumlingiswa ka-Uesugi. Ukudalula ukungazethembi nezizathu ezijulile zokuthi kungani enguthisha kwasekuqaleni.
Ukufakaza ukuthi uzibophezele kangakanani ekwenzeni izinto zisebenze nawo WONKE ama-Quintuplets, yize uNino eba sh kancane kwezinye izikhathi, kuyisifundo sokuziphatha nokuzithiba.
Ungumuntu omuhle lapho konke kushiwo futhi kwenziwe.
U-Ichika unobuqili obuncane, kepha ngezinhloso ezinhle kakhulu. Futhi ungahlangana no ukubhuqa ngoba uthanda ukuklolodela uFuutarou kakhulu.
Kodwa ngaphansi kwentelezi yakhe, isimo sakhe sokuzijabulisa nendima ka 'dadewethu omkhulu', u-Ichika ungomunye wabakhulu kakhulu ukungazethembi odade beqembu.
Ukubona lokhu kungavikeleki kudlala kamuva ochungechungeni, ngesikhathi somkhosi, kunikeza umlingiswa ka-Ichika ukujula okuthe xaxa. Ukungeza umthunzi onengqondo kokujwayelekile ubuntu jolly.
Uyakwazi ukuzihlanganisa nanoma iyiphi indawo, futhi akhanye noma ngabe unovalo noma ukhathazeke kangakanani ngempela ukuzwa ngaphakathi.
Angicabangi ukuthi i-anime ingacishe ibe mnandi ngaphandle kwendima ka-Ichika kumaQuintessential Quintuplets.
Okuhlobene: Abangu-20 Bezinhlamvu Zama-Anime Ezolile Abangaze Bacindezeleke Kakhulu
UYotsuba uyintombazane yokuqala empeleni thatha uFuutarou ngokungathi sína. Futhi akakaze aphazamise noma abangele izinkinga noma nini lapho ezama ukuhlanganisa wonke ama-quintuplets ama-5 ndawonye ngezikhathi zokufunda.
Ngingacabanga ngeYotsuba 'njengemisebe yelanga' phakathi kwabo bonke odade abahlanu. Intombazane emsulwa kakhulu ukuthi ingaqamba amanga, futhi ayishayi izungeze ihlathi lapho iziveza.
Ukuthinta okuthambile kukaYotsuba kumenza kube lula ukuzwana. Ngisho nabantu ongabazi. Futhi uma ungibuza - ungomunye wokuningi engaphansi izinhlamvu kuma-Quintuplets Quintessential!
Kuyafaneleka :: Abalingiswa be-Anime Abamnene Kangaka
5. URaiha Uesugi
URaiha ngu muhle omncane wokugcina r kaFuutarou Uesugi. Futhi empeleni yisona sizathu kuphela engimtshele ngaso.
Ukugqama okukhulu kukaRaiha kulapho u-Itsuki emenyelwa khona endlini kaFuutarou ukuze athole ukudla. Futhi uma enawo wonke ama-quintuplets ama-5 ngesikhathi somkhosi noFuutarou.
URaiha ungeza ukukhanya kwelanga eziqeshini esewonke futhi udlidliza noma nini lapho ethola isikhathi sesikrini.
6. UNino Nakano
Abanye benu bangamangala ngalolu khetho. Kungani uNino Nakano engekho ngaphansi kwalolu hlu?
Ungumuntu omncane sh ** ngubani smug kakhulu ukuze kuzuze yena. Ungaze uthi ungumgodi ** ..
Kepha yingakho ngicabanga ukuthi uyathandeka.
Kukhona 'intelezi' ethile ebuntwini bakhe, ingikhumbuza uBakugo Katsuki.
Noma engudadewethu okhalayo okhononda ngezinto ezingasile, futhi enza imizamo yokuba b a b aFuutarou noma nini lapho ethola ithuba…
Kunesizathu esijulile sokuthi kungani eziphatha ngale ndlela.
UNino nguyena ongavikelekile kakhulu eqenjini. Kepha njengonwabu - ulufihla kahle ugcina ngokugxila ekutheni ucasula kangakanani, esikhundleni sokubona ukuthi yini okungaphansi kwesimo sakhe sengqondo esibi.
Yize kunezici ezithile ezinhle kubuntu bakhe futhi. Njengokuthi uthembekile futhi uqondile kangakanani, noma ngabe unokhahlo encane.
Lesi yisizathu sami sokumbeka ngaphezu kuka-Itsuki.
Kuyafaneleka: 21 Kwama-Anime Ama-Anime acaphuna kakhulu mayelana Nempilo
Umlingisi wokugcina engimkhetha ngu-Itsuki. Hhayi ngoba esaba kabi noma ngiyamzonda u-Itsuki. Kepha ngaphezulu ngoba angizizwa ukuthi ugqame njengabanye odade.
Ngiyakuthokozela ukungazethembi kuka-Itsuki, ukungenisa iqiniso, ngisho nobuntu obunenkani. Kodwa ngize ngibone okuningi - yilapho engimi khona no-Itsuki.
Ufana ne-crossover phakathi kukaNino noMiku.
Ngingahle ngicabange ngenye indlela uma lo mbono siwususele esiqeshini sokuqala noma esi-2, kodwa kusukela lapho - ngizwa ukuthi usekhiphe ukugqama kancane. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlamvu, okungenani.
Kodwa lokho kungumbono womuntu oyedwa nje ukuthi obani abalingiswa abahamba phambili be-anime abavela kuQuintessential Quintuplets.
Ngizomane ngishiye le GIF lapha ukuqedela okuthunyelwe:
Obani abalingiswa bakho obathandayo abavela kumaQuintessential Quintuplets?
Amantombazane Ama-Anime Amahle Anga-17 Azokubulala Nge-Charm Yabo
Emibukisweni Ekhangayo Ye-Anime Ezofudumeza Inhliziyo Yakho